दलका कुन कुन नेताले भेट्दैछन् सी चिनपिङलाई ? – Hotpati Media
दलका कुन कुन नेताले भेट्दैछन् सी चिनपिङलाई ?
२५ आश्विन २०७६, शनिबार १९:४४ मा प्रकाशित (7 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ६ मिनेट
काठमाडौं – दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग भेट्ने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एक्ला एक्लै भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सभापति देउवासँग अन्य दलका नेताले भन्दा सवैभन्दा पहिले भेटेका छन्। शनिबार साँझ ७ बजे पछि राष्ट्रपति सीले होटल सोल्टीमा भेटेका छन्। त्यसपछि प्रतिपक्षी दल राजपाका नेताहरुलाई ७:४५ बजेपछि होटल मै भेट्ने छन्।
राजपाको तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव र लक्ष्मणलाल कर्णले सीलाई भेट्ने छन्।
त्यसैगरी शनिबार साँझकै डिनरपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष द्वय डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पनि सीलाई होटल मै भेट्ने छन्।
आइतबार होटल मै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीबीच १०:४७ बजे भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनाएका छन्। नेकपाका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र सचिवालयका अन्य सदस्यहरुबीच पनि सामुहिक भेटघाट हुने कार्यक्रम रहेको छ।